समानुपातिकतर्फ कसले कति सिट पाउने ? – खुल्लामन्च : समुदायको आवाज
प्रकाशित: २०७४ पुष १ गते १५:०७
काठमाडौं, १ पुस । मंसिर १० र २१ गते सञ्चालन गरिएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा नेकपा एमाले पहिलो दल भएको छ । एमालेले ८० सिट जितेर पहिलो दल बनेको हो । समानुपातिकको अन्तिम परिणाम पनि आइसकेको काराण् समानुपातिकमा पनि एमाले नै पहिलो दल बनेको छ ।
कसरी छानिने छन समानुपातिक सांसद ?
प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फबाट सिट पाउन चाहिने कुल सदर मतको ३ प्रतिशत मत पाँचवटा दलले मात्र ल्याएका छन् भने प्रदेशसभामा पनि यीनै दल हाबी भएका छन् । प्रदेशसभामा सिट कायम गर्न १ दशमलव ५ प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
चुनावमा एक करोड ५ लाख भोट खसेको थियो । प्रतिनिधिसभामा एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीले मात्र ३ प्रतिशत कटाएकाले प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकबाट यीनै पाँचदलका मात्र सांसद हुनेछन् ।
कुन दलको कति मत ?
जसअनुसार प्रतिनिधिसभामा एक सय १० समानुपातिक सांसदमध्ये सरदरमा एमालेले ४१, कांग्रेसले ४०, माओवादीले १७ तथा संघीय समाजवादी फोरम र राजपा नेपालले ६र६ सिट पाउनेछन् । प्रत्यक्षबाट थोरै मात्र महिला सांसदले जितेको संघीय संसदमा दलले पाएका यी सिटमा सबैजसो महिलालाई चयन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।